आइसियु पाइन्, तर घर फर्किन पाइनन् – Health Post Nepal
२०७७ भदौ १२ गते १२:२५
निमोनियासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण थियो। परिवारका सदस्यले पोखरा रानीपौवास्थित कास्की सेवा हस्पिटल लगे। त्यहाँ चार दिन बसेपछि निको भयो।
घर गएको दुई दिनमात्रै भएको थियो। पोखरा १२ की ३२ वर्षीया महिलामा पुरानै समस्या दोहोरिन थाल्यो। साउन २९ मा राति साई अर्चनामै लगियो।
‘उहाँ राति ८ बजे आउनुभएको थियो। निमोनियाजस्तै लक्षण भएको र आइसियु चाहिने भएकाले भोलिपल्ट बिहानै मणिपाल पठायौं,’ साई अर्चनाका निर्देशक डा. प्रेम पुनले भने। साई अर्चनासहित उपचारका लागि उनी पोखराका तीनवटा निजी अस्पताल पुगिन्। अन्तिममा कोभिड अस्पतालमा उनको मृत्यु भयो।
सामान्य स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्ने साई अस्पतालबाट उनलाई मणिपाल शिक्षण अस्पताल पठाइयो। तर आइसियु बेड खाली नभएको भन्दै उनलाई मणिपालले भर्ना गरेन।
तनहुँको बन्दीपुर स्थायी घर भएकी उनलाई त्यहाँबाट पोखरा १० स्थित कास्की सेवा हस्पिटल ल्याइयो। मणिपालबाट रेफर गरिँदा उनको अवस्था गम्भीर थियो। तीन दिन सेवा हस्पिटलमा उपचार गरेपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भयो।
‘उहाँमा निमोनियाको लक्षण थियो र श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या थियो,’ कास्की सेवाका निर्देशक डा। पदम खड्काले भने, ‘पहिले आइसियु र पछि भेन्टिलेटरमा उपचार गरेका थियौं। पछिल्लो समय उहाँ हिँड्डुल गर्न थाल्नुभएको थियो।’
निको भएर घर फर्किने दिन गन्दागन्दै कोरोना संक्रमितको ट्रेसिङमा परिन्। उनी अस्पताल भर्ना भएको भोलिपल्ट तनहुँको व्यास नगरपालिका १ की ५० वर्षीया महिला पनि सोही अस्पतालमा आएकी थिइन्।
निमोनिया, मुटुरोग र उच्च रक्तचाप भएकी उनलाई पनि आइसियुमा भर्ना गरियो। कोरोनाको आशंकामा ती महिलाको स्वाब परीक्षण गरियो। भदौ १ गते राति ९ बजे उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो। रिपोर्ट आएको दुई घन्टापछि उनको मृत्यु भयो।
‘उहाँको मृत्यु भएपछि अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र सम्पर्कका बिरामीको स्वाब लिइएको थियो। त्यसबेला बिहीबार मृत्यु भएकी महिला र एक नर्समा पोजेटिभ देखिएको थियो,’ पोखरा महानगरपालिकाका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकृत हरिलाल आचार्यले भने।
आइसियुमा उपचार गराइरहेकी ती महिलामा भदौ ७ मा कोरोना पुष्टि भएपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको कोभिड उपचार केन्द्रको आइसियुमा सिफ्ट गरिएको थियो। त्यहीं बिहीबार बिहान उनले अन्तिम सास फेरिन्। सातवर्षे छोरा र दस वर्षकी छोरीले आमा गुमाए। मृतक महिलाका श्रीमान् रोजगारीको सिलसिलामा जिल्लाबाहिर रहन्छन्।
एकैदिन कोरोना पुष्टि भएकी पोखरा १४ बस्ने सेवा हस्पिटलकी संक्रमित ३० वर्षीया नर्स भने होम आइसोलेसनमा बसेकी छन्। बिहीबार मृत्यु भएकी महिलामा पहिल्यै संक्रमण थियो वा पछि स¥यो भन्ने पत्ता लागेको छैन। ‘मणिपालबाट कास्की सेवा ल्याइएको भन्ने विवरण आएको चाहिँ हो। तर पहिल्यै संक्रमण थियो वा पछि स¥यो भन्ने अन्योल भयो,’ अधिकृत आचार्यले भने।
कोरोनाबाट मृत्यु भएकी महिला उपचारका लागि पहिलोपटक पुगेको साई अर्चना अस्पतालका गार्डमा बुधबार कोरोना पुष्टि भएको छ। कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभएका ती ४६ वर्षे गार्डलाई सामान्य ज्वरो आएपछि स्वाब लिइएको थियो।
‘गार्डलाई कसरी लाग्यो थाहा भएन। उहाँ हाम्रो रेगुलर स्टाफ होइन, आउट सोर्सिङबाट आउनुभएको हो,’ अस्पतालका निर्देशक डा. प्रेम पुनले भने, ‘अहिले अस्पताल बन्दजस्तै छ।’ मृतक महिलाको शव पोखरा महानगरपालिका ३२ मजुवामा व्यवस्थापन गरिएको छ।
योसहित पोखरामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ पुगेको छ। यसअघि पोखरा १६ का ८७ वर्षे वृद्ध र पोखरा १९ का ६२ वर्षे पुरुषको मृत्यु भएको थियो।
उपचारका लागि स्याङ्जाबाट पोखरा आएका दुई पुरुषको पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसनमा मृत्यु भएको थियो।
एकैदिन ५३ जनामा संक्रमण
गण्डकी प्रदेशमा बिहीबार ५३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
नवलपुरका ३०, तनहुँका ९, बागलुङका आठ, लमजुङका चार, पर्वत र कास्कीका एक÷एक जना रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।
यसअघि बुधबार गण्डकी प्रदेशका विभिन्न पाँच जिल्लामा ३९ जनामा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएको थियो। गण्डकीमा संक्रमितको संख्या १९ सय ५२ पुगेको छ। तीमध्ये १६ सय ६५ जना निको भएका छन्। मृतकको संख्या ९ पुगेको छ।
मृत्यु हुनेमा कास्कीका तीन, स्याङ्जाका दुई, बागलुङ, तनहुँ, गोरखा र म्याग्दीका एक÷एक जना छन्।